Global Voices teny Malagasy » Ireo mpitoraka blaogy ao amin’ny Rising Voices mandray anjara amin’ny Blog Action Day 2010 · Global Voices teny Malagasy » Print
Ireo mpitoraka blaogy ao amin'ny Rising Voices mandray anjara amin'ny Blog Action Day 2010
Voadika ny 16 Oktobra 2010 20:16 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika miora
Ny Blog Action Day  dia hetsika miseho isan-taona izay hiarahan'ireo mpitoraka bilaogy eran-tany manoratra mikasika ny olana iray ao anatin'ny andro iray. Ny tanjona dia ny hananganana ny fitandremana sy ny hanaovana adi-hevitra eran-tany mikasika ny olana goavana iray izay miantraika amintsika rehetra. Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia ny ‘rano’.
Nandray anjara tamin'ity hetsika ity ihany koa ireo mpandray anjara/mpanamora sasany ao amin'ireo fikambanan'ny Rising Voices. ‘Ndao hijery sasantsasany tamin'ny ezaka.
Juliana Rincon an'ny Hiperbarrio, Kolombia dia nanoratra  [es] mikasika ny fandanian-drano be loatra amin'ny fanasàna akanjo sy ny fandroana noho ireo fanazaran-tena isan'andro any amin'ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena :
Mazava ho azy fa mandany rano BE. Satria na rehefa mameno faran'izay kely ny fitahirizan-drano aza aho dia mila mijery ireo lamba maro hafa ho sasàna, satria misy akanjo rovidrovitra 3 mitsingevana eny ambony rano. Koa ankehitriny dia apetrako eo amin'ny foko ny tànako iray ary ny iray hafa kosa ao anatin'ny paosiko ary lasa mividy akanjo hafa hanaovana fanazaran-tena. [..]
Ankoatra izay, ny fandroana matetika anatin'ny andro iray dia manosika sy mampiakatra ny kaonteran-drano. Noho izany dia nohadinoiko ireo fahazarako ary [..] mandro indray isan'andro aho, aorian'ny fanazarana. [..]
Satria raha toa ka mora ny mitsitsy rano, tsy hisy zavatra hafa ilaiko intsony. (fandikan-teny avy amin'ny solosaina)
Ny tsy fahampian-drano any amin'ireo faritra Atsimon'i Madagasikara. Sarin'i Ariniaina
Ariniaina ao amin'ny Foko Madagascar dia nanoratra  mikasika ny fomba vaovao hanadiovana ny rano:
Naheno aho fa any amin'ny faritra Atsimon'i Madagasikara, tena mijaly ny olona amin'ny tsy fahampian-drano. Tena maina io faritra io. Mila mandeha an-tongotra kilometatra maro ny mponina vao mahita rano izay tsy tena madio akory. Misy mihitsy aza ireo mponina sasany no nànana hevitra hivarotra rano madio amin'ny sarany tena ambony.
Nizara fomba tsotra hanadiovana ny rano ny iray amin'ireo namako nandritra ny fihaonan'ny Fikambanana Anglisintsika . Mino aho fa mety ho hevitra tsara ny fizaràna izany eto androany. Antsoina hoe SODIS  io fomba io (Solar water disinfection na Fanadiovana ny Rano amin'ny alalan'ny Tara-masoandro).
Avylavitra ao amin'ny Foko Madagascar dia niresaka mikasika  ny fiarovana ireo loharano sy ny lanjan'ny fizarana rano fisotro madio:
Tena lafo dia lafo ny rano. Ankoatra izay, mijaly amin'ny tsy fahampian-drano ny faritra Atsimon'i Madagasikara. Tsy maintsy mividy rano lavitra ny tranony izy ireo, sy mitondra izany miverina mody amin'ny sarety tarihin'ny ampondra.
Noho izany, ilaina ny fampivoarana ny fampiasana ny rano, tsy tokony handany rano amin'ny tsy misy dikany isika, ary hitazona izany ho zava-pisotro.
* Ny “Famerenana ny fandanian-drano amin'ny fandemana ireo tanimbary, aorian'ny fanivànana izany amim'ny saribao sy fasika”.
* Tsy misy ny kabone, na ireo fivoahana tsaratsara kokoa. Raha ny tranga mikasika ny faritra Atsimon'i Madagasikara, mijaly amin'ny tsy fahampian-drano izy ireo. Mila mividy rano hoentina any amin'izy ireo avy amin'ny alalàn'ny fiara izy ireo, na ireo sarety tarihin'ny ampondra satria tsy misy ny loharano ao an-toerana. Matetika dia tany efitra ny any.
Inona ny toe-tsaina ilaina ananana mba hisorohana ny karazana fandotoana toy izao? Sarin'i Avylavitra
Cristina Quisbert ao amin'ny Voces Volivianas, any Bolivia dia manoratra :
“Mety tsy hisy ny rano amin'ny 13:00 folakandro ka hatramin'ny 20:00 …” vakio ny fanambaran'ny Fikambanana mpiandraikitra ny rano eto an-toerana tany amin'ny La Paz tamin'ny Martsa 2008. Ny antony dia tokony novitaina taorian'ny fantsona lehiben'ny Hampaturi Plant borke ilay fikirakirana, izay manome rano fisotro any Atsimo, Atsinanana sy Atsimo-Atsinanan'i La Paz.
Tadidiko fa nandritra ireo telo herinandro, Distrika 25 tany amin'ny tanànan'i (La Paz) no tsy nahazo famatsian-drano ara-dalàna. Maro ireo fitahirizan-drano lehibe no nipetraka teny amin'ireo faritra ireo Na dia izany aza, mahatonga olana iray hafa ho an'ireo fianakaviana ny fahazoan-drano amin'izany fomba izany, ny fitateran-drano amin'ireo tavin-drano, kapoaka kely, sy ny sisa.. [..]
Mbola mihizingizina ihany ity olana ity ary maro ireo fianakaviana mbola tsy afaka mahazo rano fisotro any an-tranony, tsy any La Paz irery ihany, fa any amin'ireo tanàna hafa any Bolivia. Izany dia satria ireo loharano niforona tamin'ny alalan'ny fiombonan'ireo tendrombohitra tahaka ny fanjavonan'ny tranga miseho any Hampaturi, ary na oviana na oviana dia mety tsy afaka hamatsiana ny fitomboan'ny mponina any El Alto sy La Paz. (fandikan-teny avy amin'ny solosaina)
Angon-tsonia n'ny Change.orgHàka Widget sonia vaovao  »
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/16/10006/
 Ny Blog Action Day: http://blogactionday.change.org/about
 Fikambanana Anglisintsika: http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=ariniaina.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Ficeclub-mada.com%2F&sref=http%3A%2F%2Fariniaina.wordpress.com%2F2010%2F10%2F15%2Fbad2010-clean-water-at-home-madagascar%2F
 dia niresaka mikasika: http://gazetyavylavitra.wordpress.com/2010/10/15/bad10-blog-action-day-2010/
 Hàka Widget: #
 sonia vaovao: http://www.change.org/petition